yinn mar'စာမျက်နှာ - အဖြူရောင်အားမာန်အွန်လိုင်းမိသားစု
"အဖြူရောင်အားမာန်အွန်လိုင်းမိသားစု "ဆိုဒ်လေးကိုလာရောက်လည်ပတ်သောမန်ဘာများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေ။ ဒီ ဆိုဒ်လေးထဲမှာ ရသ,စာပေ,ကဗျာ ,ဗဟုသုတများနှင့်နည်းပညာလေးတွေကိုမျှဝေခံစားရင်းစိုပြေလန်းဆန်းသောချက်ဘောက်လေးထဲမှာခင်မင်တဲ့သူငယ်ချင်းလေးတွေနဲ့ အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်စကားပြောကြရအောင်နော်။ ဒီဆိုက်လေးဟာ တဦးကောင်း တယောက်ကောင်း ခေါင်းဆောင်မှု့ဖြင့်မဟုတ်ဘဲ လူငယ်များ၏ စုပေါင်းခေါင်းဆောင်မှု့ စံနစ်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အင်တာဗျူးMC bayking-အင်တာဗျူးကဗျာကဏ္ဍပြိုင်ပွဲဝင်ကဗျာတင်ရန်ပြိုင်ပွဲကဗျာစည်ကမ်းပြိုင်ပွဲဝင်ကဗျာများနည်းပညာကဏ္ဍနည်းပညာတင်ရန်ဖိုရမ်ကဏ္ဍဖိုရမ်တင်ရန်flash songဖလက်လုပ်နည်း(၁)ဖလက်လုပ်နည်း(၂)ဖလက်လုပ်နည်း(၃)သီချင်းလင့်ချနည်းဖလက်လုပ်ရန်ဆော့လ်ဝဲဖလက်ပုံများမွေးနေ့ အဖြူရောင် ပရဟိတAdmin
yangonMyanmar0မန်ဘာကြိုက်ခဲ့သည်
ဘလော့ပို့စ်များ (1)ဆွေးနွေးချက်များ (1)သတင်းများအဖွဲ့များ (1)ဓာတ်ပုံများ (1)ဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်ဗွီဒီယိုများ yinn mar's Apps
yinn mar's ကြိုက်တယ် Yinn mar's သူငယ်ချင်း
အားလုံးကြည့်မယ် yinn mar's Groups
yinn mar has not received any gifts yet
kalaya commented on yinn mar's blog post စီးပွားရေးလုပ်ပါ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်အကျိုးပဲမကြည့်ပါနဲ့"လောဘကြီးလိုက်တာ...."Feb 14ဆောင်းရတီ commented on yinn mar's blog post စီးပွားရေးလုပ်ပါ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်အကျိုးပဲမကြည့်ပါနဲ့"လူတွေတောတော်လေဘတွေကြီးနေတာဘဲ...
ကျေးဇူးဘဲနော်ယင်းမာရေနာအဲဆိုင်ကိုမှတ်ထားလိုက်ပီရန်ကန်ရောက်ရင်ဝေးဝေးကရှောက်ရအောင်..."Feb 14yinn mar ဘလော့အသစ်တစ်ခုတင်ခဲ့သည်စီးပွားရေးလုပ်ပါ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်အကျိုးပဲမကြည့်ပါနဲ့ ရုံးက အပြန် အခန်းဖော်သူငယ်ချင်းက သူငယ်ချင်းရေ ဒို့မောင်ကို ဖုန်းဆက်ချင်လို့လိုက်ခဲ့ပေးပါလားဟင်အင်းသွားလေ ရေချိုးလိုက်အုံးမယ် ခဏနော်အင်း လုပ်လေ ကျေးဇူးပဲ တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေလို့သွားရမှာအေးပါ ငါနားလည်ပါတယ် ဒို့တွေလည်းမိဘနဲ့ဝေးနေတာ သူတို့လည်း မိသားစုက ဆက်သွယ်ရင် ပျော်မှာပေါ့ ငါနားလည်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဖူးသူငယ်ချင်းရယ်ကဲ သွားကြမယ် ပြီးပြီပြန်မှာပဲထမင်းစားတော့မယ် ဘယ်ဆိုင်လည်း ရန်ကင်းဈေးကွေ့က Y talk ဆိုင်ကိုပဲလားအင်း ဆိုင်ရောက်တော့ ဆိုင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးက ဘယ်ခေါ်မလဲ မလေးကိုပါ…ဆက်ကြည့်မယ်Feb 14 2
yinn mar commented on ☆☆ ♥!ဆုပန်!♥ ☆☆'s blog post အလွမ်းသ၇ဲမလေး(ခ)ဆုပန်မှကဗျာပြိုင်ပွဲတွင်၇ရှိသောဆုငွေအားပြန်လည်လှူဒါန်းခြင်းကိုလက်ခံပေးပါ၇န်......"ဆု နင်ဆုရတဲ့အတွက နင်နဲ့ထပ်တူ ၀မ်းသာမိပါတယ်
ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေနော်"Feb 13ဂျစ်ပစီမိုးတိမ် commented on yinn mar's photo1358829545_picsay-1358829545"မဆိုးပါနဲ့ကောင်မလေးရယ်......................"Feb 6ဆောင်းရတီ replied to yinn mar's discussion အလွမ်းသံသရာ in the group ကဗျာချစ်သူများ"အားပေးသွားပါတယ်ယင်းမာရေ..
ဆောင်းကိုချစ်ရင်ကဗျာတွေပြန်ရေးနော်...အားပေးနေမယ်အမြဲတမ်း.. :P"Feb 6yinn mar leftacomment for စိုင်းမြတ်သူ"ကိုစိုင်း ယင်းမာကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ယင်းမာခုငိုချင်နေတယ် ယင်းမာက ခင်လို့စတာပဲရှိတာပါ
ယင်းမာမလာပဲနေပေးပါမယ်"Feb 6yinn mar is now friends with စိုင်းမြတ်သူ and လွမ်းသူမေ၀ဘ်ဆိုဒ်တာဝန်ခံFeb 6yinn mar addedadiscussion to the group ကဗျာချစ်သူများအလွမ်းသံသရာ မေ့မရခဲ့ပါဘူးကွယ်နေ့ရက်တွေသာ ကုန်လွန်ခဲ့ပေမဲ့အလွမ်းတွေနဲ့ နှလုံးသားကိုတော့ဝေးကွာခြင်းတွေက ..................သဂြိုလ်ခွင့် မရခဲ့ပါဘူးမင်းမသိခဲ့ပါဘူးကွယ်ညဉ့်နက်နက်ရဲ့အောက်မှာမျက်ရည်စက်တွေအခစားရောက်ခဲ့ရတာမေ့ရခက် မုန်းရခက်နဲ့ ရင်ခုန်သံတွေလည်းနာကျင်ခဲ့နေပါပြီမြင်ယောင်ဆဲပါအတိတ်က အရိပ်နှလုံးသား ကြေးမုံရိပ်မှာတိတ်တိတ်လေး ငေးမော.....................ရင်မောလှပါပြီအော်.........အတူဆုံချင်ပေမဲ့ ကံကြမ္မာရယ် ......ခုတော့ခွဲရက်တယ်အလွမ်းတွေရဲ့နိဂုံး ..........................ဘယ်ချိန်ဖြစ်မလဲဆိုတာ…ဆက်ကြည့်မယ်Feb61
yinn mar joined ツi♥♡S☻စိုးလေး☻i♡♥Sツ's groupကဗျာချစ်သူများမိမိတွင်ရှိသော ခံစားချက်လေးများကဗျာလေးများကိုယခုနေရာတွင်ဖြန်.ဝေနိုင်ပါသည်ကဗျာချစ်တတ်သူများအတွက်ကဗျာလှလှလေးတွေရေးနိုင်ပါစေဆက်ကြည့်မယ်Feb66
yinn mar liked ချင်းမင်းသားလေး's discussion ကျေနပ်ပါသူချစ်သူFeb 5yinn mar commented on ツi♥♡S☻စိုးလေး☻i♡♥Sツ's blog post ကဗျာ ပြိုင်ပွဲ အကဲ ဖြတ် ဒိုင်များ အသိပေးစာ"ဖတ်သွားပါတယ်ရှင်"Feb 5yinn mar commented on မှော်ဂျိုးဖြူ's blog post သူသိပါစေ"အားပေးသွားပါတယ်
"Feb 5yinn mar commented on ပီတိ(ပေကြီး)'s blog post လူငယ်မောင်မယ်များနှင့် သူမပေးတဲ့ဥစ္စာကိုယူခြင်း"အားပေးဖတ်ရှုသွားပါတယ်
ယင်းမာ မှားရေးမိတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ် သူငယ်ချင်း
ဒီထက်မက စာပေတွေကိုဆက်လက်ရေးသားနိုင်ပါစေ"Feb 2yinn mar commented on ပီတိ(ပေကြီး)'s blog post လူငယ်မောင်မယ်များနှင့် သူမပေးတဲ့ဥစ္စာကိုယူခြင်း"အားပေးဖစ်ရှုသွားပါတယ်
"Feb 2yinn mar leftacomment for ချစ်ငယ်လေး"ချစ်ငယ်လေး မွေးနေ့မှာပျော်၇ွှင်ပါစေ
ဆန္ဒနဲ့ဘ၀ တစ်ထပ်ထဲကျပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်"Jan 31 နောက်ထပ်ကြည့်မယ် RSS
သင့်ရဲ Email က
i do't want to say
Facebook လင့် (သို့)နာမည်လေး
yinn mar's Photos
Yinn mar's Blog
စီးပွားရေးလုပ်ပါ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်အကျိုးပဲမကြည့်ပါနဲ့
Posted on February 14, 2013 at 10:37am2Comments
ရုံးက အပြန် အခန်းဖော်သူငယ်ချင်းက သူငယ်ချင်းရေ ဒို့မောင်ကို ဖုန်းဆက်ချင်လို့လိုက်ခဲ့ပေးပါလားဟင်
အင်းသွားလေ ရေချိုးလိုက်အုံးမယ် ခဏနော်
အင်း လုပ်လေ ကျေးဇူးပဲ တစ်ယောက်ထဲဖြစ်နေလို့သွားရမှာ
အေးပါ ငါနားလည်ပါတယ် ဒို့တွေလည်းမိဘနဲ့ဝေးနေတာ သူတို့လည်း မိသားစုက ဆက်သွယ်ရင် ပျော်မှာပေါ့ ငါနားလည်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဖူးသူငယ်ချင်းရယ်
ကဲ သွားကြမယ် ပြီးပြီပြန်မှာပဲထမင်းစားတော့မယ် ဘယ်ဆိုင်လည်း ရန်ကင်းဈေးကွေ့က Y talk ဆိုင်ကိုပဲလား
အင်း ဆိုင်ရောက်တော့… အပြည့်အစုံကြည့်မယ် ဘလော့ပို့စ်ထပ်တင်မယ်
အားလုံးကြည့်မယ် Comment Wall (5 comments)
You need to beamember of အဖြူရောင်အားမာန်အွန်လိုင်းမိသားစု to add comments!
January 27, 2013,ရက် 4:01pm တွင် +★♫ ကျော့မှူးခင်+★♫ မှ ပြောကြာခဲ့သည်..... အဖြူရောင်အားမာန် ၀လ်ဆိုဒ်လေးမှ လာရောက်လည်
ပတ်သူအားလုံးကို နွေးထွေးစွာဖြင့် ကြိုဆိုပါတယ် ရှင့် ဆိုဒ်လေးထဲမှာ စည်းကမ်းလေးတွေလိုက်နာပြီး ဗဟုသုတတွေရှာဖွေရင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာစကားဝိုင်းလေးထဲမှာ ဆုံတွေ့ကြပါစို့လို့အဖြူေ၇ာင်အားမာန် မိသားစုများကိုယ်စား ဆန္ဒပြုပါတယ်နော်
January 25, 2013,ရက် 2:49pm တွင် မန်ဘာကြိုဆိုရေးADMIN+I Need You+ မှ ပြောကြာခဲ့သည်..... အဖြူရောင်အားမာန်မှကြိုဆိုပါတယ် January 25, 2013,ရက် 11:51am တွင် ဆောင်းရတီ မှ ပြောကြာခဲ့သည်..... မင်္ဂလာပါဂျာအဖြူရောင်အားမာန်အွန်လိုင်းမိသားစုမှသူငယ်ချင်းလေးကိုနွေးထွေားစွာကြိုဆိုပါတယ်
January 25, 2013,ရက် 11:36am တွင် CreatorSaw Kyaw Oo မှ ပြောကြာခဲ့သည်..... January 25, 2013,ရက် 11:02am တွင် ဆိုဒ်ထိန်းသိမ်းရေးADMIN☆☆ ♥!ဆုပန်!♥ ☆☆ မှ ပြောကြာခဲ့သည်..... သူငယ်ချင်းလေးေ၇၇၇၇လာလည်တယ်နော်....အဖြူေ၇ာင်အားမာန်ဆိုဒ်လေးကနေကြိုဆိုပါတယ်နော်... အားမာန်မှပျော်၇ွှင်ပါစေရှင့်.....နည်းပညာလေးများလဲလေ့လာ၇င်းးးးးးပြန်လည်မျှဝေခံစား၇င်...ပျော်ရွှင်စ၇ာ ချက်ဘောက်လေးမှာ......သူငယ်ချင်းများနဲ့အတူလာေ၇ာက်ချကားပေါနော်.....ခိခိ....သ၇ဲလေးအိမ်လဲပြန်လာလည်နော်.......
Hello comments & graphics No comments yet!
်flashsong chit thu
© 2013 တည်ထောင်သူ အဖြူရောင် စောင့်နတ်သား. တာဝန်ခံ(စိုးလေး) ဆိုက်အလှူရှင်SawKyawOo